खानामा कपाल भेटिए किन खानु हुदैन ? यस्तो छ कारण - ramechhapkhabar.com
खानामा कपाल भेटिए किन खानु हुदैन ? यस्तो छ कारण
बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउनुका फाइदा !
तौल कम गर्न: मोटोपनाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने बिहान खाली पेट पानी, कागती र मह सेवन गर्दा पेटमा जमेको बोसो कम हुन थाल्छ । यसले मेटाबोलिजम पनि बढाउँछ । मुखको दुर्गन्ध हट्छ: कागतीपानीले मुखको दुर्गन्ध पनि हटाइदिन्छ । शरीरलाई विष रहित बनाउन यसले मद्दत गर्छ । जोर्नीको पीडाबाट राहत: जोर्नीको पीडाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने कागतीपानी पिउन थाल्नुस् ।